China 2020 factory winter winter olon-dehibe mitoby bebek / gisa nidina kitapo wholesaler orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Xueruisha
Ity kitapo fatoriana ity dia vita amin'ny lamba 20N 400T tsy mahazaka rivotra, tsy mahazaka rano ary mahatohitra ranomaso lamba, izay ahazoana aina, milay amin'ny hoditra ary sariaka amin'ny tontolo iainana. Izy io dia afaka miaro ny hafanana amin'ny fomba mahomby, mampihena ny fanaparitahana hafanana, manakana ny rivotra mangatsiaka tsy hiditra, ary manana fahaiza-manao bakteria sasany, mahatonga azy io ho hadio sy ho salama kokoa hampiasaina isan'andro. Ny fitaovana famenoana dia ganagana fotsy avo 90% avo lenta, miaraka amin'ny Fenon'ny Fill 650+ ary lanja famenoana 600g, izay afaka manome hafanana sy fiarovana avo indrindra amin'ny hatsiaka nefa tsy mampiakatra ny lanjany, manova ny fomba fijerin'ny mpampiasa ny fifandraisana misy eo amin'ny famenoana lanja sy ny hafanana. Ny tena zava-dehibe, io karazana gana io dia manana fanoherana rano tsara, ary manana diplaoma mitombo avo, izay afaka mijanona ho matanjaka amin'ny fitehirizana hafanana. Ity kitapo fatoriana ity dia iray amin'ireo vokatra ivelany be mpividy indrindra eny an-tsena, ary izy io koa dia karazana malaza manana endrika Neny. Ny fanamboarana anatiny ity kitapo fatoriana ity dia noforoninay manokana. Tahaka ny fampiasantsika 3D (telo dimensional) fisaronana mitsivalana sy boatin-tongotra, izay afaka misoroka tsara ny tsy fitovian'ny midina isaky ny fantsona midina aorian'ny fampiasana ny kitapo fatoriana mandritra ny fotoana iray izay hisy fiantraikany amin'ny fampitana fihazonana hafanana. Ny halavany feno hatevin'ny tadin'ny rivotra dia mety hisoroka ny famoahana hafanana amin'ny alàlan'ny zipper. Ary ny famolavolana vozona vozona dia hamela anao hatory milamina nefa tsy manahy ny fahaverezan'ny hafanana avy any an-damosinao. Ankoatr'ilay hood matevina dia miendrika U ho fampiononana sy hafanana, tady fihenan'ny Hood, Flap Velcro ary famolavolana hafa be pitsiny ho an'ny hafanana sisa tavela ao anaty kitapo fatoriana. Na aiza na aiza alehanao, ary na inona na inona ataonao, dia matoky tanteraka izahay fa natao ho anao ity kitapo fatoriana ity. Inona no dinihinao? Sa inona no atahoranao? Raha manana fisalasalana ianao dia aza misalasala mampahafantatra anay. Ny mpiasa matihanina dia hamaha ny olanao ary hanamboatra vahaolana ho anao faran'izay haingana.
Misafidiana hafanana amin'ny kitapo fatoriana (fampiononana)
1. Tombano ny mari-pana hitobianao. Na dia miovaova aza io isa io amin'ny vanim-potoana sy ny toetrandro, amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra dia eo anelanelan'ny 7 eo ho eo ny torimaso an'ny mpitia fitsangatsanganana mahazatra℃ ary mihoatra ny zero 7 ℃.
2. Amboary ny mari-pana tombanana etsy ambony arakaraka ny safidinao manokana sy ny toe-javatra manokana mety hatrehinao.
3. Araka ny sandan'ny mari-pana namboarina, jereo ny hafanana (fampiononana) nomen'ny mpanamboatra hisafidy ny kitapo fatoriana. Marihina fa satria tsy mitovy ny fenitry ny mpamokatra isan-karazany, ny soatoavina omen'ny mpanamboatra azy dia referansa fotsiny, tsy mihatra tanteraka amin'ny tranga rehetra.
Teo aloha: 2020 Mpanamboatra endrika maivana famenon-java-kanto azo entina amina kitapo fatoriana
Manaraka: Mpanamboatra 2020 ambony 90% nidina feno kitapo fatoriana miaraka amin'ny vidin'ny fifaninanana
Camouflage akorandriaka tantera-drano rip-mijanona portable m ...